नेकपामा गुट अदलबदल, ओली–गौतम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै::देश र जनताप्रति समर्पित
नेकपामा गुट अदलबदल, ओली–गौतम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै
प्रधानमन्त्रीले सोधे ‘विप्लव’को माग के हो ?
सरकारबाट बाहिरिने तयारी गर्दै फोरम,सरकारको समर्थन फिर्ता लिने ! के गर्ला ओली?
बाबुराम र केपीको कथा दोहोरी, हेर्नुस कसले कसलाइ पछार्यो ?
नेकपा नेता वामदेव गौतमले कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा वृक्षारोपण गरेपछी
सडकमा कोही मागेर हिँडेको देखे मलाई फोन गर्नुस् – प्रम ओली
केपी ओलीवामदेव गौतम